Taariikhda My Butros » 5 Talooyin la fulin karo si loo soo jiito Oo naagtii reer riyooyinkiinna aad
by Bill doonaya
Ha dareemaan xishood hor dumarka aad iyo guul daraystaan ​​in ay ku soo jiito?
Ha aad qabto hoos kalsooni hortooda ah?
Waxaa jira war wanaagsan oo aad u. Adiguna ma waxaad tahay mid ka mid kaliya ee uu dareensan yahay in isku. Sida maahmaahdu caanka aado
“Haweenku waa sida dhaheen harya, haddii aad fahantay, aad fahmi dunida ka”.
My sheeko la haween:
Waxaan had iyo jeer ahaa mid ka mid ah kuwa guys weeryahanku oo aan loo baahnayn oo dhan ay weheliyaan sano dugsiga sare. Ma aan ogayn wixii aad odhan lahaydeen ama samayn in ay caanka la haween.
Su'aasha kaliya in mar kasta i dabataagan ahayd sidii ay u soo jiitaan dumarka? Dhamaan asxaabta igu heeraro lahaa saaxiib aan halka marna yaabaa inay u dhaqaaqdo ugu horeysay u weydiiso gabar baxay.
Marka hore waxaan soo gaartay cabsida diidmada. Markii dambe waxa aan ogaaday in inta badan gabdhaha hareerahayga aniga ayaa hadda ku howlan iyo halkan waxaan ku jiray ka mid ah fursadaha.
Tani waxay sii waday in ay ka dhacaan wakhti dheer qaar ka mid ah ilaa walaalkay iga weyn ii siiyey talooyin dhawr. Waxaan u raaceen, oo isla goobtii helay warkiisii ​​id ah gabdhaha.
Maanta, Waxaan leeyahay xaas iyo waxa ay taariikhdeedu haweenka kala duwan. My waayo-aragnimo la haween taabato Waxaa i sameeyey oo khabiir ku ah farshaxanka dumarka jiitay. Qaar ka mid ah talooyinkan kaas oo sidoo kale kaa caawin karaan in arrintan la xiriira yihiin sidan soo socota.
1. Noqo ku kalsoon:
Isku kalsoon waxaa inta badan jecel yahay iyo mahadiyo haweenka. Waa inaad ku socotaan ee la soo dhaafay naag kasta leh aragti ku kalsoon yahay.
Wadahadal A rajo xun oo caddaynaysa in aad qabtid qalafsan cuqdad waa jeedo weyn off ee haweenka.
Haweenka sida dadka ay ku xirnaan karaan. Saasaana, had iyo jeer isku dayaan in ay u hubiyaan in haweenku ay u hesho in la ogaado in aad tahay xoog iyo hallayn. Xoogaa ka mid ah is Mahad ayaa sidoo kale kaa caawin karaan in ay soo jiitaan dumarka.
2. Bogaadin haweenka ee:
Haweenka gabi ahaanba jecel bogaadin. Waxay u badan tahay waa habka ugu wanaagsan oo ugu balaadhan looga isku dayeen in ay soo jiitaan dumarka.
Waxaad iyada amaan karaa habka ayay u egtahay, oo ay jidka ku iyadu Socon, wadahadal, labiska ama dhoolo-. Asal ahaan, wax kasta oo aad amaan iyada oo ku saabsan ka dhigi lahaa iyada ku faraxsan.
Qaar badan oo ka mid ah haweenka gabi ahaanba jecel amaanta quruxdeeda gudaha ku saabsan. Sidaas waxaad uun isku dayi kartaa oo ammaanayaa dumarka ay ku dabiiciga ah oo jilicsan oo jecel, wadnaha daryeel iyo waxyaabo kale sida, oo isla goobtii helaan dareenka.
3. Ahow dhegeyste wanaagsan:
Mid ka mid ah farqiga aasaasiga ah ee u dhexeeya raga iyo dumarka waa, goortii dadku idin sheego oo ku saabsan dhibaatada a, waxay kaa filayaan in aad in ay la yimaadaan xal macquul ah.
Si kastaba ha ahaatee, marka dumarku kuu sheegi ku saabsan dhibaatooyinka, kaliya ay doonayaan in aad dhagaysan dhibaatada iyo sulk iyada la.
Haweenku waxay wax yar ama wax dan ah oo ku saabsan xal u yihiin dhibaatada. Sidaa, waa inaad iyaga soo jiidan kara si weyn ay kaliya dhagayste fiican iyo dhegihiinna in ay leeyihiin in la yidhaahdo dhan ku bixinay. Tani waxay ka dhigi doonaa inay u maleeyaan in aad si dhab ah jecel ee daryeela iyaga ku saabsan.
4. Sii hadiyado:
Hadyadaha ay haweenka ugu faraxsan. Mid ka mid ah ugu jawaabo muhiim ah in su'aasha ah sida ay u soo jiitaan dumarka waa inaan iyaga siiyo hadiyado ee munaasabad kasta oo suurto gal ah. Sida ay haweenka, marmarsiinyo mid fudud sida ugu horeysay xiriiri u baahan yahay in laga dabaal.
Sidaa darteed, waxaa lagugula talinayaa in uu xasuus qor ah in ay ku xusuusiyaan taariikhaha yar ee dhacdooyinka. Sii hadiyadaha haweenka in ay u dabaal sanad guurada usbuuc walba ama bilwalba dhacdooyinka kuwa si ay u soo jiitaan dhakhso leh.
5. Noqo chivalrous:
Chivalry waxaa inta badan lagu qiimeeyaa dhammaan haweenka ka weyn. Hubi in aanad ilaawin faahfaahinta yar ee chivalry sida furitaanka albaabka gaariga iyada ama sugaya ilaa ay u fadhiya makhaayad in ay iyada soo jiidan. Marna ha ku qaylin iyada ama dumar kale ee iyada joogitaanka at. Tani waxay kaa caawin doontaa in aad leedahay aragti aad u xoog badan oo ku saabsan qof dumar ah oo aad rabto in aad ku biiritaankiisa.
Fikrad One qoraal ku saabsan sida loo soo jiitaan dumarka waa in ay iyaga u muujiyaan dhinaca dareenka aad. Haweenka ka jeelahay rag xoog badan oo emotionless waa mala'awaal.
Qof kasta oo dumar jecel yahay nin u qayliya doonaa garabka. Sidaa darteed, mar kasta oo ay suuragal tahay, iyada muujiyaan dhinaca dareenka aad.
Iyada qaado si movies ka taataabtay, diinnaar laambad. Waxaan isku dayay oo dhan iyo heshay taariikhaha badan oo dhan in kastoo aan nolosha.
Si kastaba ha ahaatee, hababka dhiirri iyo soo jiidashada dumarka ka duwan haweenka kale. Faahfaahinta si fiican loo caawin lahaa ii kugu hanuuniyo fiican in arrintan la xiriira si xor ah u weydiiso su'aalo dheeraad ah.
Si aad markaas, Oo nasiib wanaagsan!